Daawo muuqaalka: Ergaygii hore ee QM u qaabilsanaa Soomaaliya oo xaflad sagootin ah loogu qabtay Muqdisho |
Daawo muuqaalka: Ergaygii hore ee QM u qaabilsanaa Soomaaliya oo xaflad sagootin ah loogu qabtay Muqdisho
Ergagii hore ee Qaramada Midoobay Agostina Mahiiga ayaa la arkay isaga oo ku labistay dharka hidaha iyo dhaqanka Soomaalidu caanka ku tahay xilli uu ka qeyb gelayay xaflad sagootin ah oo Muqdisho loogu sameeyay.
Madxaweynaha Soomaaaliya oo ka hadlay xaflada ayaa waxa uu sheegay in shacabka Soomaaliyeed aad ugu mahad celinayaan Mahiiga qaabkii wacnaa ee uu ula shaqeeyay intii uu ku guda jiray shaqadiisa isag oo inta ku daray in wali uu yahay ruux Soomaalida caawin doona ee uusan aheyn ruux iska tegay.
Mahiiga ayaa dhnkiisa waxa uu ku dheeraday ka hadalka shaqadiisii isaga oo shacabka Soomaaliyeed aad uga mahad celiyay sida ay ula shaqeeyeen isaga oo madaxda cusub ee dalka u rajeeyay in ay dalka gaarsiiyan horumar lataaban karo.
Agostina Mahiga oo xilkii uu Qaramada Midoobay Soomaaliya uga hayay uu idladay sedaxdii bishaan ayaa waxa uu sanado badan kasoo shaqeynayay Soomaaliya isaga oo lasoo shaqeeyay dowladihii KMG ee dalka soo maray.
Xillgaan waxaa Qaramada Midoobay Soomaaliya u qabishan Nikalos Kay oo u dhashay dalka Ingiriiska kaa oo bedelay Mahiiga halka xafiiskii UNPOS isna lagu beelay xafiis kale oo loogu magac daray UNSOM.
Halkaan hoose ka daawo munaabadii sagootinta aheyd ee loo dhigay Mahiiga.